I-Golfer Annika Sorenstam: I-Biography kunye neNkcazo yeMisebenzi
U-Annika Sorenstam unokube yinto ehamba phambili ye-golfer ye-female; ukuba akayiNombolo 1, usondele kakhulu. Uphumelele i-majors ezili-10 kwi-LPGA Tour kuma-1990s nakwiminyaka yokuqala-2000, kunye neengu-70 ze-LPGA zizonke.
Umhla wokuzalwa: Oktobha 9, 1970
Indawo yokuzalwa: i- Stockholm, eSweden
Ladies Tour of Europe: 17
• I-Kraft Nabisco Championship: 2001, 2002, 2005
• I-LPGA Championship: 2003, 2004, 2005
• I-US Women's Open Open: 1995, 1996, 2006
• I-British Open Women: 2003
• Vare Trophy (i-average score score), 1995, 1996, 1998, 2001, 2002, 2005
• I-LPGA yemali ye-Tour, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005
• I-LPGA Tour Player yonyaka, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005
• I-LPGA Rookie yoNyaka, ngo-1994
• Umdlali we-NCAA wonyaka, ngo-1991
Ilungu, iqela le-European Solheim Cup, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2002, 2003, 2005, 2007
Annika Sorenstam ngamanani
• U-Ely Callaway: "Ubomi bam egalafu, uyayibetha efile ngokuqhubekayo ngaphezu kwayo nayiphi na i-golfer engambonayo."
• UBethel uDaniel : "Xa edlala umdlalo wakhe, ufana ne-robot.
• U-Annika Sorenstam uphendulele umjikelezo ophantsi kwiLPGA ye-Tour yembali nge-59 kwi-LPGA Standard Register Ping ka-2001.
• I-Sorenstam kunye noMickey Wright yilabo kuphela abagadi begolfu abaphumeleleyo ukuphumelela i-10 okanye ngaphezulu kweetournaments kwixesha lembini okanye ngaphezulu kwiLPGA Tour.
• Ukubona iziganeko ezihlanu ezichanekileyo ngo-2005, zibophe uNancy Lopez ixesha elide kakhulu lokuphumelela kwe-LPGA.
• Ubambe irekhodi kumvuzo omningi woMdlali wonyaka (8) kwiLPGA Tour.
• Udade kaSorenstam, uCharlotta, naye wadlala kwiLPGA Tour.
U-Annika Sorenstam ungomnye wabadlali begalufu bebhinqa bebaninzi-abaninzi banokuthi uyona mhle kunabo bonke.
Ukudibanisa ukusebenza okupholileyo kunye nesifiso esinamandla sokuphumelela, uSorenstam wayephakathi kwabadlali abalungileyo kwiTyelelo ukusuka ekuqaleni kwakhe kwiminyaka ye-1990 ukuya kwele minyaka elishumi. Kodwa njengoko ikhulu leminyaka liphendukile, uSorenstam wabuyela kwimpumelelo yempikiswano okanye edlulayo nayiphi na into eyake yabonwa kwiLPGA Tour.
U-Sorenstam wakhetha i-tennis ebuntwaneni bakhe, kodwa wathatha igalofu eneminyaka eyi-12 ubudala. Ngokukhawuleza waba nelungele ukuqala ukunqoba, kodwa wayenentloni. Kuthiwa ngezinye izihlandlo wayedla izibhengezo ukuze aqedele isibini kwaye ugweme ukuthetha nabani na emva kokuphumelela.
U-Sorenstam waya kwiYunivesithi yaseArizona apho wayeneminyaka elibini yokukhethwa kwe-All-America kunye nomdlali-mbambiswano wonyaka ngo-1991. Wawuthatha umqhudelwano we-NCAA ka-1991 kunye ne-1992 World Amateur Championship.
I-Sorenstam yajika iprogram ngo-1993 kwaye yayiyiRokie yoNyaka kwiiLesdies European Tour . Wanyuka waya kwi-LPGA ngo-1994 yaye, nangona akazange aphumelele kwi-LPGA, yayinguRokie weNyaka apho, naye. (Wafumana okokuqala ukuphumelela ngo-1994 kwi-Open Women's Australian Open).
Okokuqala ukuphumelela kwe-LPGA kwafika ngo-1995 US Women's Open , kwaye uSorenstam wabuya kwinto enokuba yinto engcono kumsebenzi weLPGA. Ukususela ngo-1995 ukuya ku-2006, uSorenstam wathola izihloko zemali ezisibhozo kwaye akazange agqibe ngaphantsi kweyesine kwirejista yemali.
Uphumelele ama-69 kunye neendwangu ezili-10 kuloo ndawo.
I-Sorenstam ingomnye wabadlali ababalaseleyo phakathi kwee-90 ukuya kwele-90, ngokuphumelela kathathu ngo-1997, ezintandathu ngo-1997, ezine ngo-1998, kabini ngo-1999, kwaye ngamahlanu ngo-2000.
Emva koko wazinikezela ukuba abe yinto engcono kakhulu, eshaya i-gym ukuze angeze amandla - kunye needidi kuye. Wayesebenzisana noTiger Woods kwaye wathatha ezinye zeendlela zokuziphatha zikaThomas; waphucula ukukhupha nokubeka.
Ukulawula kukaSorenstam ukususela ngo-2001-2005 kwagqitywa: wayeyinkokeli yemali, umgcini ophantsi kunye noMdlali wonyaka ngamnye. Amanqaku akhe athatywayo aquka u-11 ngo-2002 kunye no-10 ngo-2005.
Waba ngenye yezona zimbona ezona zide kunaloo tyelelo ngaphandle kokulahlekelwa naluphi na ukuchaneka kwayo. Ngandlela-thile, waziva ekhululekile phambi kweekhamera, ukuziphatha kwakhe komntu ukuba nokwethemba ngakumbi, kunye nokuphumelela kwamaninzi amaninzi.
Kwi-Colonial ka-2003, uSorenstam waba ngowokuqala ngowama- Babe Didrikson Zaharias ukuba adlale kwi- PGA Tour . USorenstam wadubula u-71-75 waza walahleka ukusikwa, kodwa wafumana ama-plaudits ngokudlala kwakhe kunye nendlela aphethe ngayo i-circus.
Incwadi ethi Golf Annika's instruction (thelekisa amanani) yakhululwa ngo-2004.
I-Sorenstam yayilawula i-LPGA Tour kwakhona ngo-2005, kodwa umdlalo wakhe wancinci ngo-2006 - "kuphela" iintlawulo ezintathu, wayegqithiswe nguLorena Ochoa phezulu kwe-LPGA.
I-Sorenstam yahlutha intlungu ngomnyaka ka-2007 eyayiwunciphisa ishedyuli sayo, kwaye ekupheleni konyaka wayenomdla wexesha elinesibini kwi-LPGA.
Ekuqaleni kuka-2008, kunjalo, uSorenstam ubuyile, kunye neentathu zincinci ekuqaleni kwexesha. Nangona kunjalo, ngo-Meyi 13, 2008, uSorenstam wamemezela ukuba yayiza kuba ngumzuzu wakhe wokugqibela kwi-LPGA Tour, kwaye washiya igalofu yokukhuphisana ekupheleni konyaka.
Kuwo wonke umsebenzi wakhe, uSorenstam yayiyintloko yeqela le-European Solheim Cup . Ngethuba elithatha umhlala-phantsi, wayedlala imidlalo emininzi kwaye wafumana amanqaku amaninzi kwanoma yimuphi umdlali kwimbali yeNdebe yeNdebe. Wayephethe irekhodi le-22-11-4 jikelele kwi-Play-Cup ye-Solheim.
Emva kobomi bokubhenketha bephelile, uSorenstam waphendukela kwishishini. Phakathi kwamanye amathuba avula i-academy waza waqalisa ishishini lokuyila ikhosi. Wabuye waqalisa intsapho kunye nomyeni uMike McGee, ngubani onyana wengomdlali wePGA Tour uJerry McGee.
Ngubani Osebenze Njengomnye weeKigidi zeTiger Woods?
Quotes Sam Snead
UDiane von Furstenburg: Umyili weMfashini Ngubani owamisa iingubo zokugqoka
Bangcwele Bama-Superhero: UkuLevi, Amandla okuHlaver okanye iFly
Inkampani yaseBritani yaseMzantsi Afrika (BSAC)
Amaphekula eGalofu eya ngasekhohlo kodwa echanekileyo: Iintsilelo kunye neengxaki
Formulario de ESTA para jar sin visa eU.SA